Iividiyo zokufunda ezininzi kunye neArcGIS-Geofumadas
IiVideos zokufunda i-Manifold ne-ArcGIS
Ngo-Okthobha, 2008 ArcGIS-ESRI, GIS asibonise
I-ScanControl yiwebhusayithi enezinto ezininzi zokubonisa, kodwa eyona ibambe umdla wam kukuba ibonise uthotho lweevidiyo zeArcGIS kwasekuqaleni, nto leyo engothusiyo kuba sisixhobo esithandwa kakhulu; kodwa into enomdla kukuba ikwabonisa uthotho lweevidiyo ezininzi ze-GIS, isixhobo esikhulayo kodwa esinomxholo omncinci ngohlobo lweevidiyo obonwe kwesi sicelo.
Zonke iividiyo eziboniswe kwi-ScanControl zakhiwe nge-Adobe Captivate, ke zinolawulo lwenkqubela phambili kunye nezixhobo ezibonakalayo zento esebenzayo. Banokukhutshelwa kwakhona ukujonga kubo kwi-flash player kwisisombululo esingcono.
Olu uluhlu lwevidiyo ze-ArcGIS
Icandelo le-1: Ukudala iGeDatabase kwi-ArcCatalog
Icandelo le2: Ukudibanisa iithebula zangaphandle kwi GeoDatabase
Icandelo le-3: Ukufometha umxholo weemephu kunye neSigqibo seSicelo seSiseko
Le yoluhlu lwevidiyo ze-GIS eninzi
Icandelo le-1: Ukungenisa i-geometri nokudibanisa idatha
Icandelo le-2: Ukusebenzisa imibuzo ukucoca idatha kunye nokuvelisa iimephu zeemveliso ezivela kuzo
Icandelo le-3: Ukudibanisa kwiimifanekiso zeStaneti
Icandelo le4: Ukongeza amaphuzu
Icandelo le-5: Imifanekiso ye-digital georeferencing
Icandelo le6: Ukudala iifayile ze-kml zeGoogle Earth
ICandelo le-7: I-Enterprise GIS (ishishini)
Ukusebenzisa i-GIS Empesarial (ishishini)
Icandelo 8: Ukusika imidwebo kunye nedatha
Ukongezelela kukho ezinye iividiyo Umcebisi weGIS malunga ne-GIS eneenkcukacha, kwaye nangona zihlawulwa zilungile.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Street View ibaluleke kakhulu eYurophu
Post Next I-Bentley iya kuhambisa i-Microstation Athens V8iOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "iividiyo zokufunda ezininzi kunye neArcGIS"
URicardo Alamilla uthi:
Indlela amavidiyo afundiswa ngayo